Huawei ọ bụla nwere ohere ịzọpụta onwe ya na nsogbu ya? | Gam akporosis
Huawei ka nwere ohere iji zọpụta onwe ya?
Huawei na-eche izu ndị siri ike ihu na akụkọ ntolite ya. Mkpebi gọọmentị US nyere ndị na-emepụta ihe na China na-ebute ụzọ dị egwu. N'otu aka ahụ, ekwentị ika agaghị enwe ike iji gam akporo, ma ọ bụ ọrụ Google ma ọ bụ akụrụngwa. Mana nke a bụ ihe metụtara ụlọ ọrụ ndị America na mkpokọta, yana nsonaazụ nke a ga-enwe maka akara ndị China.
Ọ bụ ya mere, ọtụtụ ụlọ ọrụ kwụsịrị ịmekọrịta na Huawei. Enweghị obi abụọ banyere ihe nwere ike ime, ugbu a enwere ndị obere nkwekọrịta nke ọnwa atọ, na - enwe mmetụta na - adịghị mma na ụlọ ọrụ ahụ. N'ezie, ahịa gị na-ata ahụhụ ugbu a maka oge ojoo a. Ọ bụ ezie na ohere nke nzọpụta ka dị.
A hụla nkwekọrịta ọnwa atọ ahụ dị ka ihe dị mma. N'otu aka, ọ na-enyere ụlọ ọrụ aka inwe ntụsara ahụ dịtụ mma, na-akwadebe iji sistemụ gị maka ọdịda a. Mana ọzọkwa ọ na-enye oge ka United States na China nwee nkwekọrịta, ekele nke veto a adịghị adị na ihe niile na-aga n'ihu dị ka ọ dị na mbụ.
Gịnị na-eme Huawei m ugbu a ọ na-agba ọsọ na gam akporo
1 Ekwe omume nke nkwekọrịta
2 Kedu ihe China ga-eme?
3 A ga-azọpụta Huawei?
Ekwe omume nke nkwekọrịta
O kwere omume nkwekọrịta dị n'etiti United States na China bụ ihe ekwuru kemgbe mbido agha a. N'ezie, ọtụtụ na-ahụ veto a nke Huawei dị ka ngwa ọrụ nrụgide n'akụkụ Donald Trump. Onye na-eme ekwentị bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị na China, kamakwa n'ụwa niile. Ya mere gọọmentị America mara na ọ bụ mpaghara nke ha nwere ike imerụ China.
Mba abụọ a na-akparịta nkwekọrịta azụmahịa maka ọnwa ole na ole, nke ga-ejedebe agha a nke tarifu na ụtụ isi ha na-etinye kemgbe ọnwa. Agbanyeghị na mkparịta ụka ndị a anaghị aga n'ihu ọsịsọ dịka Donald Trump ga-achọ. Maka nke a, etinyere ụtụ isi ọhụrụ izu ole na ole gara aga ma ugbu a enwere nsogbu ndị a na Huawei. Wayzọ iji tinyekwuo nrụgide na mkparịta ụka ahụ ma nweta nkwekọrịta ga-abara gị uru.
Ya mere, nhọrọ a ekwesịghị ịhapụ iwu. N'ezie, na nkwupụta nye ndị nta akụkọ, Donald Trump n'onwe ya anaghị ahụ anya ọjọọ na nkwekọrịta ahia na China gụnyere Huawei. Ya mere na akara ngosi China ga-anọgide na-enwe ike ime ihe ọ bụla n'ahịa. Nkwupụta okwu ụfọdụ na-emeghe ụzọ maka nkwekọrịta dị etu a. Na mgbakwunye na ime ka ebumnuche onye isi ala America na nke a doo anya, onye na-achọ inweta nkwekọrịta bara uru.
Kedu ihe China ga-eme?
Otu n’ime ihe ịtụnanya dị ugbu a bụ na ọ dịghị onye na-aza China. Mgbe United States na-etinye ụtụ isi ọhụrụ na ngwaahịa ndị China, gọọmentị China na-azakarị ozugbo site na usoro ọhụrụ, na-abụkarị ụdị ụtụ isi. Agbanyeghị na ọgụ a, gọọmentị na-agbachi nkịtị. Ihe nke na - eme otutu ntule na mgbasa ozi.
N'ihi usoro nke United States megide Huawei, ọtụtụ tụrụ anya ihe yiri nke ahụ sitere na mba Eshia nke enyere Apple aka. Mkpebi nke nwere ike imebi ọtụtụ ihe gbasara ụlọ ọrụ Cupertino, yana gọọmentị America. Ọ bụ ezie na nke a ga - eme ka esemokwu dị n'etiti ndị otu a ka njọ. O yiri ka gọọmentị China ọ ghọtara na United States jiri Huawei dị ka ngwá ọrụ nrụgide na mkparịta ụka.
Ya mere, ha na-ahụ nke a dị ka donald trump nzuzu (Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ). Ya mere, ha echeghi na ọ dị mkpa iji otu ego ọgụ, ihe nwere ike itinye ha na mwepu na mkparịta ụka ahụ na United States, nke na-aga n'ihu na-eme njem n'agbanyeghị nsogbu ndị a na izu ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụ ezie na oge a ọ bụ ụlọ ọrụ ndị mebiri emebi. Ma maka ire ere, nke na-ada, na mmebi onyonyo.
A ga-azọpụta Huawei?
N'ụzọ ụfọdụ, ọnọdụ ahụ enwewo ụfọdụ ihe jikọrọ nke ZTE nwetara. Onye nrụpụta ahụ tara ahụhụ na mgbochi na United States, nke mere na ọ nweghị ike iji ngwa ọ bụla sitere na ụlọ ọrụ America. Ihe nke dọkpụrụ na ọnwa ole na ole wee fọrọ nke nta ka ụlọ ọrụ ahụ baa ego. N’agbanyeghi na ha mechara kwekọrịta, ya mere ọ ka na-arụ ọrụ taa.
Ya mere, ọ ga - ekwe omume na nke a bụ otu ihe ahụ ga - eme na Huawei. Ọ bụ ezie na ụda a na-eyi egwu karịa, ọ dị ka a Ordago nke America iji nweta ihe mgbaru ọsọ achọrọ, nke na nke a bụ nkwekọrịta azụmahịa nke ha na-atụle dị mma maka ha. Ya mere enwere ike na ọnọdụ a ga-adigide ruo ọnwa ole na ole. Nkwekọrịta ahia dị n'etiti abụọ ahụ bụ ihe na-anọgide na-ekwe omume. O yikarịrị, oge nkwekọrịta dị, nsogbu ga-akwụsị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei ka nwere ohere iji zọpụta onwe ya?
Motorsport Manager 3 maka ezigbo ndị na - ahụ egwu F1 - anyị nwalere ya site na ịnwere onwe anyị ụbọchị ndị a
KaiOS ka bu ihe ozo di nma nye gam akporo Go